Qoyska `Messi-ga yar` ee Afghanistan oo mar kale gurigooda ka qaxay |
Qoyska `Messi-ga yar` ee Afghanistan oo mar kale gurigooda ka qaxay
Wiil yar oo Afghanistan u dhashay, kaas oo baraha internet-ka caan uga noqday taageerada uu u hayo cayaar yahanka Lionel Messi ayaa lagu qasbay inuu mar kale ka qaxo dalkiisa.
Murtaza Ahmadi, oo hadda toddoba sano jir ah, ayaa internet-ka qabsaday sanadkii 2016 kaddib markii sawir laga qaaday isagoo xiran funaanad bac laga sameeyay oo uu ku sawiran yahay Messi, taas oo bac laga sameeyay.
Waxaa markii dambe u suurto-gashay inuu Messi kula kulmo dalka Qadar.
Qoyskiisa ayaa sheegay inay hadda ka guureen gurigooda ku yaalla dalka Afghanistan, kaddib markii ay hanjabaado u soo direen Taliban.
Waxay ku noolaayeen gobolka koofur-bari dalkaasi ku yaalla ee Ghazni – oo ay maleeshiyaadku bartilmaameedsanayeen – waxayna u qaxeen magaalada caasimadda ah ee Kabul.
Waxay muddo gaaban qaxootinnimo ugu joogeen dalka Pakistan sanadkii 2016, balse way soo laabteen lacag la`aan awgeed.
Funaanadda gacan-ku-sameyska ah
Murtaza ayaa shan sano jir ahaa markii uu ixrtay funaanada bacda laga sameeyay, taas oo lagu xardhay midabbada buluugga iyo caddaanka ee astaanta u ah kooxda qaranka ee Argentine, oo uu Messi ka tirsan yahay. Waxaa funaanadda lagu qoray nambarka cayaartoyga ee 10.
Kaddib markii sawirka si weyn loogu wadaagay baraha bulshada, dadka ayaa ku baaqay in xoga wiilkaasi la soo helo si uu Messi uga jawaabo arrintaasi.
Markii magaca wiilka la shaaciyay, ayuu cayaartoyga wiilkaasi u soo diray hadddiyad – ay ku jirto funaanad saxiixan – oo uu u soo mariyay hay`adda arrimaha carruurta ee Unicef, oo uu Messi danjire ahaan kula shaqeeyo.
Murtaza ayaa markii dambe lagu casuumay inuu la kulmo Messi xilli xiddigga Barcelona uu cayaar ku lahaa dabayaaqadii sanadkii 2016.
Si kastaba, qoyskiisa ayaa sheegay in caannimadooda ay sababtay in ururka Taliban uu u soo hanjabo.
Hooyadiis Shafiqa ayaa sheegtay in rag ka tirsan kooxda oo la soo xiriiray ay ku u sheegeen inay markan taajir noqdeen oo ay bixiyaan lacagta uu Messi siiyay, haddii kalena ay wiilkooda kaxaysan doonaan.
Waxay sheegtay inay awoodi waayeen in hantidooda ay kala baxaan guriga, sida funaanaddii haddiyadda ahayd, iyagoo xilli habeen bar ah ka baxay gurigooda kaddib markii ay xabbado maqleen.
waaliddiintiisa iyo walaalihiisa afarta ah ayaa ku nool hal qol oo ku yaalla Kabul
Dhulka la haysto
Qoyska Murtaza ayaa ka soo jeeda qowmiyadda Hazara ee Shiicadu ay ku badan tahay, taas oo ay bartilmaameedsadaan Taalibaanka Sunniga ah.
Deegaanka Ghazni ayaa ku jirta gacanta dowladda, balse waxaa lagu tiriyaa inay istaraatiiji u tahay dagaalka u dhaxeeya dowladda iyo Taliban.
Kooxda ayaa bishii August ee sanadkan weerarro ku qaaday halkaas, iyagoo sii lalalaabay bishii la soo dhaafay ee November, waxayna kumannaan qof ku qasbeen inay guryahooda ka qaxaan. Boqollaal qof oo ay ku jiraan rayid iyo ciidan ayaa lagu dilay weerarradaas.